Madaxda Madasha oo maanta ka shiraya muranka ka jira xubnaha Aqalka Sare ee Sool iyo Sanaag | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Madaxda Madasha oo maanta ka shiraya muranka ka jira xubnaha Aqalka Sare...
Madaxda Madasha oo maanta ka shiraya muranka ka jira xubnaha Aqalka Sare ee Sool iyo Sanaag
Mashada Hoggaanka Wada-tashiga qaran ayaa maanta oo Talaado ah ku shiraya magaalada Muqdisho, iyagoo ka wada hadlaya sida laga yeelayo muranka ka taagan xubnaha Aqalka Sare ee ka imaanaya Gobolada Sool iyo Sanaag.
Shirkan oo lagu iclaamiyay war murtiyeedkii 8-dii bishan ka soo baxay Madasha oo ay go’aan kaga gaareen xilliga ay dhaceyso doorashada ayaa la filayaa in arrimaha ugu weyn ee laga hadlayo ay yihiin xal ka gaarista halka laga soo dooranayo xubnaha Sool iyo Sanaag.
Waxaa lagu wadaa in shirka uu furmo gelinka dambe ee maanta, maadaama aanay qaar ka mid ah Madaxda Madasha aanay ku sugneyn magaalada Muqdisho, lana filayo in gelinka hore ee maanta inay yimaadaan.
Shirkii todobaadkii hore ee Madaxda madasha ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka maqnaa Madaxda Puntland iyo Jubbaland, inkastoo wakiilo matalayay ay ka qeyb galeen.
Doorashadii xubnaha Aqalka Sare ee Somaliland ka imaanaya ayaa dib loogu dhigay tabashada Puntland ka timid, iyadoo dooneysa in labada xubnood ee ka imaanaya Sool iyo Sanaag loogu daro, hadii kale ay qaadici doonto doorashada.
Puntland ayaa dooneysa in saami ka badan midka ay ka heshay Aqalka Sare la siiyo, iyadoo 11 xubnood ay ku leedahay, waxaa ay dooneysaa in labada xubnood ee Sool iyo Sanaag ee Beelaha Harti Waqooyi loogu daro.
Hase ahaatee siyaasiyiinta iyo salaadiinta ka soo jeeda Gobolada Waqooyi ayaa ka biya diidan, waxaana ay horay u qaadaceen doorashada, inkastoo markii la xaliyay tabashadooda ay ogolaadeen.
Beesha Caalamka ayaa horay us heegay in aanay aqbali doonin wax dib u dhac ah oo ku yimaada doorashada, waxaana ay ka digeen cawaaqibka ka dhalan kara, hadii sanadkan ay ku dhici weyso doorashada.
Lama oga sida xal looga gaari doono muranka ka jira xubnaha Aqalka Sare ee ka imaanaya Sool iyo Sanaag, waxaana lagu wadaa in shirka oo ah mid hal maalin ah si deg deg ah looga gaaro xal kama dambeys ah.
Maalinta Khamiista oo ku beegan 15-ka bisha December ayaa lagu wadaa in lagu dhaariyo magaalada Muqdisho Xubnaha baarlamaanka labada aqal, iyadoo 22-ka bishan la dooranayo Guddoonka Baarlamaanka, halka 28-ka bisha ay dhaceyso doorashada Madaxweynaha.
DHAGEYSO:-Warka Subaxnimo Radio Baidoa 20-9-2021